अनौठो समाचार: कार्यालयमा प्रेम, विवाह अनि ७२ घन्टापछि…. – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > अनौठो समाचार: कार्यालयमा प्रेम, विवाह अनि ७२ घन्टापछि….
admin February 1, 2020 जीवनशैली, रोचक	0
एजेन्सी– भारतको उत्तर प्रदेशबाट प्रेम विवाह भएपछि एक जोडीबारे अनौठो समाचार बाहिर आएको छ । उनीहरु एउटै कार्यालयमा काम गर्दै थिए, प्रेममा परे र विवाह गरे ।तर, विवाह गरेको ७२ घन्टा पनि नबित्दै यो जोडीकी पत्नी प्रहरी चौकीमा पुगेकी छिन् । चौकीमा पुगेर उनले श्रीमानको परिवारले आफूलाई स्वीकार नगरेको आ रो प लगाएकी छिन् । उनका अनुसार उनलाई घरमा स्वीकार गरिएको छैन । यसले गर्दा घरमा समस्या भएको भन्दै ती युवती प्रहरीमा पुगेकी हुन् ।
ख्यालख्यालमै बसेको प्रेम चुमिरहेछ सफलताकाे शिखर